Zụta nkwekọrịta ngwugwu - SoNuker
Zụrụ ihe osise YouTube
Zụta nkwekọrịta ngwugwu
Free Instagram na-eso ụzọ
Zụta Mmasị IGTV
Zụta elele Instagram
Zụta Ndị Na-eso Twitterzọ Twitter
Debanye / nbanye
Ihe Mgbakwunye Nkwalite Nkwalite vidiyo
Ngwunye Ngwungwu Ngwunye Channel na Video
Nchịkọta nlele 1000
1000 Echiche $ 20
50 Mmasị $ 7
100 mbak $ 10
10 Comments $ 20
A na-enyefe ọrụ na 1 vidiyo kachasị.
Nchịkọta nlele 2000
2000 Echiche $ 30
100 Mmasị $ 13
Ọrụ 250 $ 20
20 Comments $ 35
Ọrụ nwere ike kewaa n'etiti 1-2 videos kacha.
Nchịkọta nlele 3000
3000 Echiche $ 40
200 Mmasị $ 20
Ọrụ 500 $ 30
30 Comments $ 50
Ọrụ nwere ike kewaa n'etiti 1-3 videos kacha.
Nchịkọta nlele 4000
4000 Echiche $ 50
300 Mmasị $ 25
Ọrụ 1000 $ 50
40 Comments $ 65
Ọrụ nwere ike kewaa n'etiti 1-4 videos kacha.
Nchịkọta nlele 5000
5000 Echiche $ 60
400 Mmasị $ 35
Ọrụ 2000 $ 80
50 Comments $ 80
Ọrụ nwere ike kewaa n'etiti 1-5 videos kacha.
Nchịkọta nlele 10000
10000 Echiche $ 100
1200 Mmasị $ 70
Ọrụ 5000 $ 130
100 Comments $ 140
Ọrụ nwere ike kewaa n'etiti 1-10 videos kacha.
Ngwunye Njikọ Ọwa
Nyocha 1 Ọwa $ 120
1 Channel Banner Design $ 60
1 Channel Profaịlụ Ntugharị Ntaneti $ 25
Anyị nyefere ọrụ a na ọwa 1.
Ngwungwu njikarịcha vidiyo 6
6 Nyocha vidiyo $ 150
6 Ekike vidiyo thumbnail $ 130
Anyị na-enyefe ọrụ ndị a na vidiyo 6.
Kedụ uru dị na ịzụrụ ngwugwu ngwugwu?
Emere ngwugwu ngwugwu iji jikọta ọrụ niile ị kwesịrị ịzụrụ ọnụ maka nsonaazụ kacha mma na ego efu. Dịka ọmụmaatụ, kama ịzụrụ echiche 5,000, ị ga-enweta arụmọrụ kachasị mma na nsonaazụ pụtapụtara mgbe ịzụrụ ihe 400 amasị, 2000 mbak na ihe 40. Anyị na-ejikọta ọrụ ziri ezi iji nye gị nsonaazụ kacha mma.
Kedu ihe ngwugwu ngwugwu kachasị ewu ewu?
Ndị kacha ewu ewu na ngwugwu ndibiat bụ "5000 Echiche ngwugwu." Nke a nwere ike-agbasa gafee 1 ka 5 videos kacha. Agbanyeghị, ngwugwu anyị na-akwado ọ bụla iji zụta bụ na "Channel & Video Optimization Package Deals" a na-akpọ ya "Channel Channel Optimization Package." Ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe ịga nke ọma gị na YouTube, ị ga-ebuli nnukwu mbuli elu site na ịhapụ anyị ka ị mata ọwa gị, gwa gị ihe ị kwesịrị ịgbanwe ma nye gị ọkachamara ndị ọkachamara iji nye ọwa gị ụdị "nnukwu oge YouTuber".
You na-enye azụmahịa ndị ọzọ?
Anyị nwere ike ịkwadebe azụmahịa ngwugwu omenala. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgwakọta ma dakọtara na ọrụ ndị ọzọ, ma ọ bụ mụbaa ọnụọgụ nke ụfọdụ ọrụ, kpọtụrụ anyị ma mee ka anyị mara ọrụ na ọnụ ọgụgụ nke ọrụ ọ bụla ịchọrọ ijikọ. Anyị ga-enye gị otu onyinye ọdịnala.
Lee anyị 1,600 + nyocha na
SoNuker na-enye ọtụtụ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na netwọọdụ iche maka inweta ndị ntanetị YouTube na ndị na-enwe mmasị na YouTube n'efu.
USA & IKE: USA & NKE: 888-881-9070
Etu esi eji YouTube zụọ ahịa na họtel gị?
Nke a bụ ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere YouTubezụta Echiche YouTube
Etu esi agbakwunye transcripts na vidiyo vidiyo gị ga-eme ka ndị na-edebanye aha gị bawanye
Atụmatụ 7 iji wuo katuunu katuunu na YouTube nke a ga-ahụ n’anya n’ụwa niile
Ntuziaka gị na Timestamps na Isi na YouTube